China ALUMINUM SPECIAL TIE ROD Factory na ndi na emeputa | Tongbao
AKW SPKWỌ AKW TKWỌ TBỌCHUKWU TIN ROD
Ozi nke nkiti
1.Brand Aha: TongBao
2.Engine: Igwe nju oyi
4.Wheel Size: ihu 10 * 4.5-5 "“ N'aza 11 * 7.1-5 "
5.Oil Tank ikike: 30L
6.Max kacha nke ọsọ: 3600RPM
8.Brake :dị: Brake Hydraulic
9.Usage: Maka Go Kart Use
10.Warranty: Akwụkwọ ikike maka afọ 1 maka ụdị ngwaahịa niile
11.Origin: Jiangsu, China (Mainland)
Ihe Nke Ogologo Nri eriri Ozo n'obosara Agba
1. Ihe: Aluminium 6061.
Gold Pie Mpempe Pụrụ Iche
N'oge ọsọ ahụ, onye na-agba ọsọ ga-eji okpu agha kpuchie nchekwa ya, uwe aka nke nwere ike ichebe aka gị niile, uwe otu nwere nke nwere ike ichebe ahụ niile, ogwe aka na ụkwụ, na akpụkpọ ụkwụ nwere ụkwụ dị elu iji kpuchido nkwonkwo ụkwụ. ọkpụkpụ.
Ihe ndi choro maka ndi oso
1. Onye na-agba ọsọ na ndị ọzọ so n'òtù ya nwere ọrụ nke ịgbasochi iwu na usoro nke agbụrụ na irube isi na ntuziaka nke agbụrụ, ka onye nhazi nke agbụrụ wee nwee ike mezue ọrụ nke agbụrụ ahụ. A ga-ata onye na-agba ọsọ na-anaghị erube isi ruo mgbe a ga-ewepụ ya n'ọsọ ahụ. Nnyocha ndị ọzọ so n'ìgwè ahụ nwere ike ime ka a chụpụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ otu ahụ.
2. Ndị otu na ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ ga-aza maka nchekwa nke ndị ibe ha, hazie ha ka ha lelee ọsọ ahụ site na oche ndị nkiri, debe usoro ọsọ ahụ, ma nwee ibu ọrụ ịkwụsị ha ije ma ọ bụ ịgafe agbụrụ ahụ. akara na omume ọ bụla na-ezighi ezi.
3. Ndị otu a ga-enwe ikike ịta ndị agbụrụ niile ntaramahụhụ maka omume ojoo ọ bụla na-enweghị isi, dịka imerụ ndị ọrụ agbụrụ ahụ iwe ma ọ bụ mesoo ha (gụnyere ma ejedebeghị na ya) n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'ihi nsogbu ọ bụla. ntụzịaka n'asọmpị nke ndị otu egwuregwu ụgbọ ala China mere.
4. Mmebi ọ bụla nke iwu ndị a site n'aka ndị racer ma ọ bụ onye mezi ebe a na-akwado ụgbọ ga-eme ka ịhapụ onye agha ahụ, ọ ga-ewetakwa ntaramahụhụ siri ike site na mkpezi ikpe.
5. Ndị ọkwọ ụgbọala meriri ga-anọrịrị ịga emume afọ ọ bụla, ma ọ bụ a ga-enye ha ego 5,000 RMB.
6. - Onye isi ndị na-ahụ maka agbụrụ nwere ikike ịjụ ma ọ bụ ịkwụsị ọkwọ ụgbọ ala nke mebiri emebi tupu mmalite nke agbụrụ ahụ.
- Ndị ọkwọ ụgbọala mebiri iwu n’oge agbụrụ ha (ma ewezuga azụ ikpeazụ) ga-akwụsị na mpaghara ndozi edepụtara ma dozie mmebi ahụ tupu ha nwee ike ịga n’ihu. Ndị na-enye onyinye si
- N’agba ọsọ, anaghị anabata onye ọkwọ ụgbọ ala ịnabata enyemaka ọ bụla na mpụga n’okporo ụzọ (belụsọ mpaghara mmezi) naanị ike idozi nsogbu ahụ. A chụrụ onye ahụ iwe.
- Ọnọdụ ọ bụla enweghị ike ịnya onye ọkwọ ụgbọ ala n'akụkụ nke agba ọsọ ahụ. A chụrụ onye ahụ iwe.
- Anaghị enye ndị ọkwọ ụgbọala ịhapụ mpaghara mkpọchi mkpọchi ma banye na egwu na-enweghị akara sitere na onye na-emegharị ahụ. A chụrụ onye ahụ iwe.
- Amachibidoro ya ịkwọ ụgbọala karts na mpụga circuit ebe agbụrụ ahụ na-aga n'ihu.
7. Ndị na-agba ọsọ niile ga-ezute Onye duziri ndị na-agba ọsọ ga-enwe nzukọ nke ndị ọkwọ ụgbọala ọ bụla tupu ebumnuche mmalite nke ebumnuche ha na ebumnuche ndị a:
- Chetara ndị ọkwọ ụgbọala nke ngalaba ndị pụrụ iche nke iwu gbasara ọsọ ahụ.
- Chetara ndị na-agba ụgbọelu ka ha leba anya n'ihe ndị metụtara nchekwa na mkpa pụrụ iche nke agbụrụ ọsọ.
- Ọ na - akọwa ma na - aza ajụjụ ndị ndị ọkwọ ụgbọala kwuru gbasara iwu.
Ndị niile agbụrụ ga-enwerịrị na nnọkọ ahụ. A ga-edebanye aha gị. Ndị agaghị ada asọmpi ahụ n’enweghị ezigbo ihe mgbakwasị ụkwụ, a ga-agụpụ ha n'asọmpi ahụ. Ndị ọzọ na-abịaghị gosi n'oge, a ga-ata ha ego ruru narị naịra 500 na-adabere n'ịkpa ikpe ahụ.
Mmepụta & mbukota
Nke gara aga: UGWU ROUND TIE ROD
Osote: MAKA ANYANWU SPROCKET
AXLE COLLAR NA KEYWAY